Ladgaalanka Bidaarta iyo Timaha Dib Loo Beerayo Maxaa sababay Masse Dhici kartaa in rag Danbiilayal ahi aay sawirka wajigooda ku Belayaan | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Ladgaalanka Bidaarta iyo Timaha Dib Loo Beerayo Maxaa sababay Masse Dhici kartaa...
Ladgaalanka Bidaarta iyo Timaha Dib Loo Beerayo Maxaa sababay Masse Dhici kartaa in rag Danbiilayal ahi aay sawirka wajigooda ku Belayaan
Bidaartu waxay bartilmaameedsataa qaar ka mid ah ragga, waxaana loo sababeeyaa arrimo kala duwan oo isugu jira dhaxal waalid, fikirka badan iyo cimilada, laakiin sabab kasta oo ay ku timaadaba, ma aha mid la jecel yahay.
Ragga sida weyn ula tacaala bidaarta ama timahu ay ka dhammaadaan qeybaha hore iyo kuwa dhexe ee madaxa waxaa ka mid ah Soomaalida oo geed dheer iyo mid gaabanba u fuula iney wax ka qabtaan arrintaas, oo ay dhibsadaan, inkastoo ragga qaarkiisna aysan dhibaato u arkin.
Waxaa jira dad lacago kumannaan doolar ah ku bixiyay in timaha dib loo beero, waxayna u safraan dalal fog fog oo ay dhakhaatiirtoodu gaareen tignoolojiyadda timaha lagu abuuro.
Laakiin hadda war farxad leh ayaa u soo yeeray ragga hammiga ku haya iney bidaartooda xal u helaan, horayna ugu fakarayay iney aadaan waddamada uu ka mid yahay Turkiga, oo lagu ammaano inuu sameeyo adeegyo timo beeris ah oo aad u wanaagsan.
Ragga Soomaaliyeed ayaa hadda billaabay iney deegaanno kala duwan uga yimaadaan, si ay u booqdaan xaruntaas ka haqab tireysa adeegga ay in muddo ahba ku taamayeen.
Shidane Xasan Shidane wuxuu dhowr maalmood ka hor ka tagay magaalada Muqdisho isagoo bidaar leh, laakiin iminka wuxuu dib u laabanayaa isagoo ay timihiisu joogaan foodda hore.
Wuxuu ka mid yahay 4 qof oo markii ugu horreysay timo beeris loogu sameeyay magaalada Hargeysa.
BBC-da ayuu uga warramay qaliinka timaha loogu beeray ee uu shalay galay.
“Meeshu way bannaaneyd markii hore, haddana waa idinkaas arkaya iney timo ku yaallaan. Tintu mid kale ma aha waa tinteydii oo la soo qaaday oo horay la keenay. Alle ayaa mahad iska leh, Shidane oo oday ah ayaa yimid, haatanna waxaad u jeeddaan Shidane oo dhallinyaro ah” ayuu yiri isagoo dhoolla caddeynaya farxadna ay ka muuqato.
Hadalkiisa ayuu sii watay, isagoo aad u qoslaya ayuuna yiri “Hadda waxaan reerkeygi ku noqonayaa anigoo nin kale ah”.
Ismaaciil Axmed Heybe oo ah agaasimaha isbitaalka howshan fuliyay, ayaa BBC-da u sheegay in 15 ruux oo kale ay isku diiwaan galiyeen in timaha loo beero.
Tallaabadan ayaa qeyb ka ah adeegyada isqurxinta dadka oo muddooyinkan ku soo badanayay magaalooyinka Soomaalida.
Hase yeeshee waxaa ku cusub timo beerista ragga oo ah adeeg meelo kale loo aadi jiray.
Previous articleGudoomiyaha Xisbiga Ucid oo Xaflad uu ka qaybgalay Qudbad Dheelitiran ka Jeediyay Qabyaalada Siwayn Uga Hadlay
Next articleYuhuuda oo Cirka Ka Weerartay Marinka Qasa ee xamaas haysato halka Ururka Xamaas 300 oo gantaal ku garaacay magaalooyinka yuhuuda